विदेशी मुद्रा साट्नु छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमय दर – Etajakhabar
विदेशी मुद्रा साट्नु छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमय दर
काठमाडौँ । आज बिहीबार नेपाली बजारमा नेपाली राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ९६ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ७५ पैसा छ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४८ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै बहराईन दिनार एकको खरिददर २९४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९५ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १४ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ २९ पैसा छ। त्यस्तै यूके पाउण्ड एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ९८ पैसा छ भने बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ ७७ पैसा छ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खदिददर ३६४ रुपैयाँ ८९ पैसा, बिक्रिदर १६६ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ।तालिकामा हेर्नुहोस् अन्य देशको विनिमय दर
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ३०, २०७५ समय: ११:१७:०१